RGN-BKK Relief Flight for February
𝟏𝟑𝐓𝐇 𝐘𝐀𝐍𝐆𝐎𝐍 – 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 – 𝐘𝐀𝐍𝐆𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐅 𝐅𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐍 𝟏𝟐 𝐅𝐄𝐁𝐑𝐔𝐀𝐑𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟏
မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း (MNA) မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံရုံးနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ တွင် ဘန်ကောက်သို့သွားရောက်မည့်ခရီးသည်များနှင့် နေရပ်သို့ပြန်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် အတွက် Relief Flight ခရီးစဉ်အား ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် 15:00 16:55
(UB - 2017)
ဘန်ကောက် - ရန်ကုန် 18:25 19:20
(UB - 2018)
ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါမည့်ခရီးသည်များအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ စုံလင်စွာရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို MNA Call Center +951 378603 – 04 – 06 – 07 – 08 | +951 377840 – 41 – 42 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဘန်ကောက် - ရန်ကုန် ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး မှ ထုတ်ပြန်ထားသောခရီးသည်စာရင်း အတိုင်းပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်မေးမြန်းမှုများအား +66 981019505( English & Thai speaker) နှင့် +66 857233221( Myanmar/ မြန်မာ စကားနှင့် မေးမြန်းရန်) သို့ဆက်သွယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Myanmar National Airlines (MNA) will operate Yangon – Bangkok - Yangon Relief Flight on 12 February 2021
Yangon – Bangkok 15:00 16:55
Bangkok – Yangon 18:25 19:20
Passengers who are traveling from Yangon to Bangkok with the relief flight must have the necessary documents to enter Thailand. For detailed information, please contact MNA Call Center +951 378603 – 04 – 06 – 07 – 08 | +951 377840 – 41 – 42.
Bangkok – Yangon relief flight will be operated for passengers listed by the embassy of the Republic of the union of Myanmar. For detailed information, please contact +66 981019505( English & Thai speaker) and +66 857233221( Myanmar Speaker).